CAJIIB: Jamaahiirta Barcelona Oo Rumaysan In Lionel Messi Uu Yahay Laacibka Labaad Ee Ugu Fiican Ee Ay Waqtigan Haysaan - Yaa Ka Wanaagsan Ee Jooga Camp Nou? - Gool24.Net
CAJIIB: Jamaahiirta Barcelona Oo Rumaysan In Lionel Messi Uu Yahay Laacibka Labaad Ee Ugu Fiican Ee Ay Waqtigan Haysaan – Yaa Ka Wanaagsan Ee Jooga Camp Nou?
Taageereyaasha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa rumaysan in xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi aanu ahayn ciyaartoyga ugu wanaagsan ee ay waqtigan haystaan, waxaanay u malaynayaan inuu jiro laacib kale oo ka tirsan kooxdooda koowaad inuu ka sarreeyo Leo.
Kooxda reer Catalonia oo Khamiistii guul-darro 2-1 ah kasoo gaadhay Osasuna oo ugu timid Camp Nou, waxay u ahayd maalin murugo oo ay iskugu darsameen horyaalka LaLiga oo ay Real Madrid kaga guuleysatay iyo guul-darrada kusoo gaadhay garoonkooda.
Lionel Messi oo ah kabtanka kooxda, una dhaliyey 22 gool 20 kalena caawiye ka noqday ayaa ciyaarta kaddib ku baaqay in isbeddel badan la sameeyo, si ugu yaraan kulanka Champions League ee Napoli ay ku qaabbili doonaan lugta labaad ee wareegga 16-ka ay uga soo gudbi karaan.
Inkasta oo aanu cidna magacaabin, haddana waxa uu Lionel Messi xusay in madax illaa minjo masuul laga wada yahay hoos u dhaca ku yimid kooxda iyo xili ciyaareedka ay faraha madhan ka taagan yihiin.
Wargeyska Marca ayaa afti ka qaaday taageereyaasha Barcelona Khamiistii, waxaanu weydiiyey inay soo doortaan sida ay ciyaartoygoodu u kala fiican yihiin xili ciyaareedkan, waxaana si layaab leh kaalinta koowaad looga waayey Lionel Messi.
Goolhayaha reer Germany ee Marc-Andre ter Stegan ayaa kaalinta koowaad ka cidhiidhsaday Lionel Messi, laakiin arrinta kale ee cajiibka ah ayaa ahayd in Gerard Pique oo la’aantii difaacu kala daadsan yahay iyo Sergio Busquets oo marka uu maqan yahay dhexdu wiiqan tahay aanu midkoodna kasoo muuqanin 10ka kaalmood ee ugu sarreeya ee kala-wanaagsanaanta ciyaartoyda Barcelona ee xili ciyaareedkan, sida taageereyaashu ku muujiyeen codkooda.
Da’yarka Riqui Puig ayay jamaahiirtu u doorteen ciyaartoyga saddexaad ee ugu wanaagsan, waxaana kusoo xiga oo afraad soo galay Ansu Fati.
Antoine Griezmann oo xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey ku qaadanaya Barcelona, kaddib lacag badan oo ay Blayugrana kaga soo iibsatay Atletico Madrid, waxay jamaahiirtu u doorteen inuu yahay ciyaartoyga 18aad ee kooxdooda, ayna ka fiicnaayeen 17 laacib oo kale.
Halkan kaga bogo codbixinta taageereyaasha iyo siday u kala doorteen laacibiintii ugu fiicnaa xili ciyaareedkan: